Yaseshashalazini, kufanele Chemberlin Kevin sekuwuphawu zaseNew York indima yakhe njengomPristi yomkhaya e "I Addams Umkhaya." Kodwa ngo-movie izethameli wabona ukuthi umuntu kuphela iziqephu ezimbalwa.
Uthando ngesikhathi indima yokuqala
indima yakhe yokuqala ekukhiqizeni isikole "Tom Sawyer" Chemberlin Kevin akangabazanga ekukhetheni umsebenzi esikhathini esizayo. Wahamba ne ukuphikelela yephupho, futhi kuphela Ubukhulu okusezingeni eliphezulu theatergoer onohlonze kwembulwa kuye enye indlela. Guy balithanda wrestling. Walinda sesithembiso esikhulu kwezemidlalo okhokhelwayo. Abaqeqeshi bajabula kakhulu lapho kuphuma kanzima nokuzinikela lomfana. Abeluleki wabikezela kuye ikusasa-Olympic yangempela.
Kunalokho nomdlandla izilaleli ihlombe Kevin yeswa ememeza abalandeli. Kunzima ukuba yahlulele ukuthi ilungelo wayekhethwe yakhe. Lapho kufika isikhathi sokuba akhethe indlela esizayo ngemva kokuthweswa iziqu, Chemberlin Kevin ukucabanga eside futhi ushiye umdlalo. Wanquma ukuchitha ukuphila kwakhe ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini.
Big Kevin - indima enkulu
Lokhu kukhetha kwakubonakala ohlangothini silly. Abaningi waxwayisa umfana mayelana ukungabikho esizayo futhi zinethemba eliqhakazile. umfana Big esafunda esikoleni samabanga umbuthano waseshashalazini ongabala ngendima izinhlamvu omkhulu cishe akukho kwemifanekiso. Wayedlala esiteji kuphela izilo futhi losers nge uthando unrequited. Ngesikhathi esifanayo kwi uhlaka i-wrestling, wahlala iqhawe kunothile ngokunqoba ngerekhodi. Ukukhetha lo msebenzi wokwenza kuchazwe kuphela Luhambo Amazing kuye.
Esikhathini esizayo, akukabi isikhathi ancike olokuthatheka empumelelweni ezigcawugcawu. The guy kwaba uyakuqaphela lokhu abanomsebenzi othile futhi wayazi konke nobunzima wakhe, kodwa ngaso sonke isikhathi elinde iziphakamiso ezivela abaqondisi.
Chemberlin Kevin kwakuzokwenziwa ngu isineke okulungiselelwe yena ngoba indima ebaluleke kunazo zonke ekuphileni. After School Ubuciko esizayo Broadway izigcawu oyiculayo iminyaka 5 wazakhela ukudlala ikhibhodi kuze impumelelo kuqala.
Conquest yesehlakalo yaseshashalazini
Ukukhiqizwa "Intuthu phezu Intaba" Wavula izilaleli yaseshashalazini a talent entsha in ubuciko Melpomene elinamathemba okusezingeni eliphezulu lekusasa. Chemberlin Kevin, ogama isithombe okwamanje lutho ukhuluma nomphakathi, uzokwazi bathethelele zonke Izibuyekezo rave. It izikhathi eziningana ukuba abaphakanyiselwe umklomelo ohlonishwa for yaseshashalazini-goers.
Ngaphezu edume "I Addams Umndeni", kwaba indima edumile ukukhiqizwa "Dirty Blonde" futhi "Syussikle". Sekuyisikhathi eside imibono enjalo izivakashi zakwamanye amazwe e-New York. Broadway - ke iyisici esibonisa wangempela edolobheni. Lapha, Kevin wakwazi ayoziveza ku imikhiqizo ezilandelayo:
"Unyaka My Favorite."
"Eyb Linkoln Illinois."
"Triumph of Love".
Debut e ebhayisikobho Kevin senzeka ngo '32 ku isethi ingxenye yesithathu "Die Hard" ngokubambisana edume Bryusom Uillisom. Elapho wadlala sapper, eyayifuna ukudambisa amaphekula ibhomu. Endabeni inkanyezi yesehlakalo yaseshashalazini njengoba Kevin Chamberlin, ama-movie e ithelevishini babe umthombo eyengeziwe Lodumo.
Nge idatha yangaphandle yayo yimuphi umlingisi liyakulahla yokuzihlanganisa inhlamba unomphela Executive kancane izingxenye. Abaqondisi ungafuni ukudlala uhlamvu yisakhiwo sodumo okuthiwa Kevin. amabhayisikobho akhe ukukhazimulisa namanye amaqhawe. Kodwa Broadway inkanyezi lena akuyona neze namahloni. Ukulungele ukuba angene uzimele a cameo esifushane amagama ambalwa, noma kwemifanekiso, ujabulela ukusebenza kuthelevishini. iqhaza lakhe kule sitcoms kakade ehlotshisiwe imisebenzi eminingana "eside egijima".
Lokhu kanzima e izikebhe umlingisi akwenzeki ekhononda doling isifaniselo abalobi ngoba amaqhawe abo. Kunoma yikuphi phrojekthi, kuba Ukulungele ukuhlangabeza iKosi eliphakeme izinga in the game. Bayingcosana ozakwabo babe uhlamvu efanayo. Nokho, kuyinto kusasekuseni ukuqagula ukuthi lokhu ukuthi wayezokwelapha yini ukuthola ukuthi uyonqoba esikrinini noma enkundleni yemidlalo kuyoba inkanyezi kafushane iDemo ifilimu. Kunezibonelo eziningi indima enkulu kanjani kakade ezama ukubamba umlingisi kakhulu eminyakeni yokuguga.
Mhlawumbe kwenzeke, futhi ngenkanyezi okuthiwa Kevin Chamberlin. Uneminyaka emingaki yena ubuntu bakhe ngaleso sikhathi, namanje kunzima ukusho. Umlingisi isivele ayisekho abasha. Mhlawumbe emhlabeni ifilimu umkhakha it dumisa indima le ndoda endala. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi ngenhla, ithalenta lokhu inkosi esingalindelekile phansi.